Recep Tayyip Erdogan Ayaa Loo Dhaariyey Xilka Madaxweynenimo Ee Dalka Turkey | Cabays.com
Recep Tayyip Erdogan Ayaa Loo Dhaariyey Xilka Madaxweynenimo Ee Dalka Turkey
Recep Tayyip Erdogan ayaa loo dhaariyay madaxweynaha Turkiga kadib markii uu ku guuleystay doorashadii bishii hore taas oo u ogolaatay inuu sii wado awoodiisa Madaxweynenimo.
Munaasabadda waxaa ka qeybgalaya Badi hoggaamiyaasha ajaanib ah iyo marti-sharafeedyo, oo ay ku jiraan ra’iisal wasaaraha Ruushka Dmitry Medvedev, madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro iyo Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Nidaamka cusub, 64-sano jirka Erdogan wuxuu hogaamin doonaa laanta fulinta ee dawladda wuxuuna xaq u leeyahay in uu magacaabo loona saaro madaxweyne ku-xigeen, boos cusub, iyo sidoo kale wasiirro, saraakiil sarsare iyo garsoorayaal heer sare ah .
Madaxwaynaha ayaa sidoo kale awood u leh in uu kala diro baarlamaanka, oo soo saaro qaynuunnada fulinta iyo soona rogo xaalad degdeg ah.Erdogan, oo muddo shan sano ah ku guuleystay Aqlabiyada codadka doorashada la dhiibtay 52.5%
Erdogan ayaa horey u sheegay in aysan jiri doonin xubno ama xildhibaan ka tirsan Xisbigiisa Cadaalada iyo Horumarka (AK Parti) ee ku yaala golaha cusub ee cusub, isaga oo xusay in ay ka koobnaan doonaan siyaasiyiin iyo saraakiil sarsare.
isku dheellitirka, dhaqaalaha
Erdogan, oo awood u leh in ka badan 15 sano oo ah ra’iisul wasaare iyo madaxweyne, ayaa marar badan ku nuuxnuuxsaday in madaxweyne awood leh uu abuuri doono jawi deggan oo u oggolaanaya in waddanku uu “tallaabooyinka mustaqbalka ku Talaabsado”.
Xisbiyada mucaaradka ah, kuwa reer galbeedka Turkiga iyo kuwa kale ee naqdiyaasha ayaa sidoo kale, waxay sheegeen in nidaamku uu madaxweynaha siinayo awoodo waaweyn oo cusub iyada oo aan loo baahnayn baaritaanno iyo miisaaniyad, laguna magacaabo “hal-xukun”.
Xaalad degdeg ah ”
Erdogan ayaa ballan-qaaday sidii loo xoojin lahaa xaaladda degdegga Erdogan ayaa sheegaysa in la xidho cid kasta oo taageerayaasha Fethullah Gulen ah – oo ah hoggaamiye diineed oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyay fashilaadii lagu helay – hay’adaha dawladda iyo qaybaha kale ee bulshada.Xigasho – Aljazeera English